Maamulka Puntland oo saaka dil toogasho ku fulisay 21 Rag ah | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maamulka Puntland oo saaka dil toogasho ku fulisay 21 Rag ah
Maamulka Puntland oo saaka dil toogasho ku fulisay 21 Rag ah
Maxkamadda Ciidamada Puntland ayaa Maanta waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku toogatay 18 qof oo dhawaan lagu xukumay dil, ka dib markii lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, isla markaana ay dilal ka geysteen Magaalada Gaalkacyo.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maxkamadda Ciidamada Puntland ayaa sheegeen in tirada markii hore dilka lagu xukumay ay ahaayeen 17 eedeysane, hase yeeshee ay maxkamaddu dib ugu laabtay kiiska eedeysanaha kale, taas oo tirada guud dilkii saaka ka dhigeysa 18.
Labad todobaad kahor ayay ahayd markii maxkamaddu ay raggan ku xukuntay dilka.
Waxaana Guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada Puntland Jeneraal Maxamuud Cabdi Maxamed uu sheegay markii ay go’aankan maxkamaddu ridday inuu ahaa mid caddaalad ah.
Ragga Maanta dilka toogashada ah lagu fuliyay ee Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ku jira rag saraakiil ah, kuwaas oo dhowr jeer wareysiyo laga qaaday ku sheegay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen muddo badana la Shaqeeynayeen, waxaana saraakiishaas kamid ah Faysal Axmed Bashiir (Gujis), Maxamed Xaashi Mu’min (Abu-dayib) iyo Maxamed Cali Cuuke (jeeri).
Previous articleSoomaaliland oo maxkamadaynaysa in ka badan 50 dhallinyaro ah iyo sababta
Next articleKhasaaraha nafeed ee ka dhashay dhismihii ku dumay Maraykanka oo kordhay